AnTuTu na -enyocha arụmọrụ Meizu 17 tupu ebido ya | Androidsis
AnTuTu, ebe ekpughe ya top 10 nke taa kacha mma na-arụ smartphones ma gosi ụfọdụ ọrụaka data na Meizu 17 na a na-adịbeghị anya mmepe, ugbu a ọ na-abịa ọzọ ekpughe niile ike bụ nke a na-esote elu-arụmọrụ ọnụ na a ga-eze kpughere on April 17, ụbọchị taa bụ otu izu.
Dabere na ọnụọgụ nke usoro nyocha ahụ bipụtara, anyị ga-anabata gị na ekwentị nwere otu nke kachasị mma nke afọ a, n'enweghị obi abụọ, a eziokwu na a ga-tumadi chụpụrụ site na ike kacha ike Qualcomm chipset.
Nseta ihuenyo dị n'okpuru na-ekpughe na edepụtara usoro ahụ n'okpuru aha aha koodu M2081 na akara AnTuTu ngụkọta nke ihe 580,851. Na mbụ, ụdị abụọ nke Meizu 17 ndị ụlọ ọrụ 3C nke China kwadoro ha n'okpuru aha aha M081Q na M081M.
M081M kwuru na aha ya bụ M2081. Ya mere, ndị mgbasa ozi ekwubiwo na nseta ihuenyo ahụ kwekọrọ na Meizu 17. Tụkwasị na nke a, akara AnTuTu na-egosi na nke a bụ ụdị flagship, na naanị ekwentị dị elu dị elu nke si ụlọ ọrụ China bụ Meizu 17, ọ dị mma kwụpụta .
Meizu 17 arụmọrụ na AnTuTu
Dị ka anyị kwuru, ikpo okwu mkpanaka nke a ga-etinye n’okpuru mkpuchi nke ama ozo a bu Qualcomm Snapdragon 865, 7nm chipset nke nwere nkwenye ndị a: 1x Cortex-A77 na 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 na 2.42 GHz + 4x Cortex-A55 na 1.8 GHz. Ya mere, Adreno 650 GPU ga-ahụ maka ịgba ọsọ eserese na egwuregwu chọrọ. , ebe njikọ 5G agaghị apụta ìhè site na enweghị ya. Na nke a, anyị ga-agbakwunye n'eziokwu na ọ ga-abata na ihuenyo AMOLED nke 6.5-inch na mkpebi FHD +.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » AnTuTu na-enyocha arụmọrụ nke Meizu 17 tupu ebupụta ya
Etu esi emeghe ma gbanwee faịlụ HEIC na gam akporo